Izaho ve dia Hofehifehezin’i Dada sy Neny Foana? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Népali Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tatar Tiorka Tseky Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
Mahatsapa ho voafehifehy loatra ve ianao ao an-trano? Miresaha àry amin’ny ray aman-dreninao. Hanampy anao hanao an’izany ity lahatsoratra ity sy ilay fampiasana miaraka aminy.
Jereo izay mahatsara an’ilay izy
Fidio tsara ny fotoana hiresahana amin’izy ireo, ary hajao izy
Hevi-diso: Tsy misy mifehifehy anao izany intsony rehefa miala ao an-trano ianao!
Inona no tena marina? Na efa tsy ao an-trano intsony aza ianao, dia tsy maintsy misy olona mifehy anao foana, ohatra hoe ny mpampiasa anao, ny tompon-tranonao, na ny fanjakana. Hoy i Danielle, 19 taona: “Raha tsy zatra mankatò ny dadany sy neniny ny ankizy iray, dia ho tena sahirana izy rehefa lehibe ka tsy ao an-trano intsony.”
Hoy ny Baiboly: ‘Ankatoavy ny fanjakana sy ny manam-pahefana mpitondra.’ (Titosy 3:1) Raha zatra mankatò ny ray aman-dreninao ianao, dia tsy ho sahirana rehefa lehibe.
Izao atao: Eritrereto hoe inona ny soa ho azonao raha zatra mankatò ray aman-dreny ianao. Hoy ny ankizilahy iray atao hoe Jeremy: “Lasa nahay nifidy namana sy nandamina fotoana aho, rehefa nanaraka ny tenin’ny dadanay sy neninay. Tsy lany fotoana be nijery tele na nilalao video koa aho, fa nanao zavatra hafa mahasoa kokoa. Mbola tiako foana ny manao an’ireny hatramin’izao.”
Ary ahoana raha hoatran’ny tsy misy dikany ilay itenenan’ny ray aman-dreninao anao? Hoy ny ankizivavy iray atao hoe Tamara: “Navelan’i Dada sy Neny nankany andafy aho, nefa tsy avelan-dry zareo mitondra fiara manketsy akaiky kely etsy. Miala 20 minitra avy eto aminay fotsiny anefa ilay tanàna tiako haleha.”
Ahoana raha ataon’ny ray aman-dreninao hoatr’izany koa ianao? Tsara raha miresaka amin-dry zareo ianao. Tokony ho hainao tsara fotsiny hoe rahoviana ianao no hiresaka aminy, dia ahoana no hanaovanao an’izany.
Rahoviana ianao no hiresaka aminy? Hoy ny tanora iray atao hoe Amanda: “Miezaha foana aloha manao izay rehetra lazain’ny dada sy neninareo, dia hatoky anao ry zareo. Amin’izay ianao vao afaka milaza amin-dry zareo hoe inona amin’ny zavatra tsy avelany hataonao no mafy be aminao.”
Hoy koa ny ankizivavy iray atao hoe Daria: “Rehefa hitan’ny mamanay hoe nankatò foana aho, dia izay aho vao navelany hanao izay zavatra tiako sasany.” Tadidio fa tsy hoe lasa matoky anao ho azy akory ny ray aman-dreninao. Izay ataonao ihany no mahatonga azy ireo hatoky anao na tsia.
Raha tsy mety mankatò ray aman-dreny ny ankizy, dia hoatran’ny mpanamory fiaramanidina samy manao izay tiany rehefa midina eo amin’ny seranana
Hoy ny Baiboly: “Ankatoavy ... ny didin-drainao, ary aza atao tsinontsinona ny lalàn-dreninao.” (Ohabolana 6:20) Araho io toro lalana io dia hatoky anao foana ny ray aman-dreninao. Amin’izay ianao vao afaka miresaka amin’izy ireo momba an’izay eritreretinao.
Ahoana no hanaovanao an’izany? Hoy ny ankizilahy iray atao hoe Steven: “Aleo foana manaja sy tony rehefa miresaka amin’ny ray aman-dreny, toy izay mimenomenona na milelalela.”
Hoy koa i Daria: “Rehefa miady amin’ny mamanay aho, dia tsy manaiky ny teniko mihitsy izy fa vao mainka aza mihenjana.”
Hoy ny Baiboly: “Ny fahatezeran’ny tsisy saina dia avoakany daholo, fa mahatsindry fo hatramin’ny farany kosa ny hendry.” (Ohabolana 29:11) Ilaina foana ny mianatra mifehy tena. Handray soa be dia be ianao amin’izay, tsy rehefa ao an-trano ihany, fa rehefa any am-pianarana koa, na any am-piasana, na any an-toeran-kafa.
Izao atao: Mieritrereta tsara aloha vao miteny. Lasa mety tsy hatoky anao intsony indray mantsy ny ray aman-dreninao, raha tezitra be ianao rehefa miresaka aminy. Izany no antony ilazan’ny Baiboly hoe: “Ny olona tsy mora tezitra dia tena manana fahaiza-manavaka.”—Ohabolana 14:29.
Soso-kevitra: Mety hampisaintsaina anao ilay fampiasana miaraka amin’ity lahatsoratra ity. Ifampiresaho amin’ny ray aman-dreninao ilay izy, raha ilaina.
“Raha mankatò ray aman-dreny foana ianao, dia lasa zatra manaja olona sy mifehy tena. Tena ilainao ireo toetra ireo na rehefa lehibe aza ianao. Soa ihany aho fa zatra nankatò an’ny dadanay sy neninay. Raha tsy izany, dia ho nanaonao foana aho na baranahiny be ny fiainako.”—Kimberleigh.
“Indraindray izaho nanao zavatra tsy mety na nitady hanao zavatra tsy mahasoa an’ahy, dia avy eo nieritreritra aho hoe mba tsy rariny koa ny nataon’i Dada sy Neny. Izao vao tsapako hoe aleo foana mankatò an-dry zareo.”—Kaley.
Inona no Mahatsara ny Mankatò Ray Aman-dreny Foana?
Nahoana no Mifehifehy Be ny Ray Aman-dreniko?